Izindawo ezingama-8 zemilingo eSpain (II) | Izindaba Zokuhamba
Usuvele ubonile abane bokuqala izindawo eziningi zemilingo eSpain, futhi manje laba abanye abane bayadlala. Siyaqhubeka nokujabulela ukubukeka kwemvelo kobuhle obukhulu, izindawo eseziyimilingo ngenxa yezici zazo noma ngenxa yokuthula okuphefumlelwa kuzo. Lezi yizindawo nokuvakashelwa umuntu okufanele akwenze okungenani kanye, ukuzwa ukuthinta kwemilingo nokukhethekile kwemvelo.
Kusuka ebhishi elikhuphukela maphakathi nezwe liye ehlathini elithandekayo. Lokhu kukhethwa okuncane nakho kuhle, futhi njengoba konke kuseSpain singavakashela lezi zindawo ezinhle ku ukuphunyuka ngempelasonto. Qaphela ukuthi zihluke kanjani futhi zithakazelisa kangakanani, ukuze uzibhale phansi njengokuvakasha okuzayo ku-getaways yakho.
1 Ibhishi laseGulpiyuri
2 Isigodi sase-Ordesa
3 IGarajonay National Park
4 UHells Throat
Ibhishi iGulpiyuri lingenye ye- okukhethekile kakhulu kweSpain nezwe, nokuthi ingaphakathi nendawo, ayibheki ngqo olwandle, kepha iphakathi kwezimfunda, yize iseduze nogu. Lokhu kuyenza ibe yimfihlakalo, icishe ibe ngumlingo, kube sengathi yavela emhlabeni uqobo. Incazelo ilula kakhulu, futhi ukuthi amanzi olwandle angena ngemigudu emadwaleni futhi afinyelele kuleli bhishi elincane elingamamitha-skwele angama-50, nokho elithola izivakashi eziningi ngenxa yokuthi lihluke kanjani.
Lolu lwandle lutholakala phakathi kweLlanes neRibadesella, futhi ifinyelelwa ngedolobha laseNaves, eliseduzane. Kuyo ungahamba emadwaleni ulalele ama-'Jesters ', umsindo owenziwa amanzi lapho enyonyoba ngemihubhe yamadwala. Ukugeza kuyo kubalulekile, yize kusenyakatho yeSpain, e-Asturias, isimo sezulu ngeke sikuphelezele kuze kube sehlobo.
Isigodi i-Ordesa sitholakala ngaphakathi kwe- I-Ordesa y Monte Perdido National Park, okuthe kusukela ngo-1982 kuhlanganisa lokhu nezinye izigodi ezintathu, iPineta, i-Escuaín Gorges ne-Añisclo Valley. Esigodini i-Ordesa sithola izindawo ezinhle ezingokwemvelo zezintaba, ngakho-ke ukuvakasha okuhle kulabo abanomphefumulo wabahloli, ngoba bangathola konke kusuka emahlathini kuya ezimpophomeni. Amahora okuvula avamise ukuba ngo-9: 00 a.m. kuya ku-14: 00 pm nango-16: 15 pm kuya ku-19: 00 pm, yize kushintsha ngokuya ngesizini. Ngaphezu kwalokho, kunamaphuzu wolwazi kanye nensizakalo yebhasi ongayithola kusuka eTorla, njalo ngemizuzu engu-15 noma engama-20.
Kulesi sigodi sizothola izindawo ezithakazelisa ngokukhethekile, njengeCascadas del Arazas, umfula onamanzi acwebezelayo enza isimo semilingo ngokuphelele. Ngakolunye uhlangothi, ungabona ama-cirque wemvelaphi yeqhwa, njengeSoaso neCotatuero. Kufanele futhi ujonge nehlathi leTurieto, inqwaba yefir emhlophe lapho kunezihlahla khona kanye nezihlahla eziningi. Bancoma ukuba sesimweni esihle ngokomzimba futhi ngaphezu kwakho konke babe nolwazi oluthile lwentaba ukuze bangalahleki noma babe nezinkinga kuyo, kepha ezindaweni zokuthola ulwazi banemizila nezindawo zokuthakazelisa.
IGarajonay National Park
IGarajonay National Park itholakala isiqhingi saseLa Gomera, futhi imele u-11% wobuso besiqhingi. Leli paki liqanjwe ngenganekwane lapho abathandi uGara, owayeyinkosazana yaseGomera, noJonay waseTenerife benquma ukucwilisa umkhonto bagxume besuka endaweni ephakeme kakhulu ngenxa yokungamukelwa abazali babo. Ngaphandle kwensumansumane, leli paki liyindawo enomlingo futhi engaqondakali, ikakhulukazi emahlathini alo aluhlaza nakulawo mafu athanda ukuhamba nawo isikhathi esiningi, okubanika umswakama owanele wokuhlala nalolo hlaza.
Kuleli hlathi ungakujabulela amahlathi e-laurel, amahlathi ama-laurel asinda emahlathini asendulo asezindaweni ezishisayo ayekhona eYurophu naseNyakatho Afrika izigidi zeminyaka edlule, ngakho-ke kufana nokungena komunye umhlaba, esikhathini esedlule. Ngaphezu kwalokho, kunesikhungo sezivakashi nemizila eminingi esivele imakiwe, ngakho-ke ukuhamba komndeni kungumsebenzi omuhle. Endaweni yaseLaguna Grande kunendawo ekahle yokuphumula, enezindawo zepikiniki, indawo yokudlela nenkundla yokudlala yezingane.
IHells Throat inegama elithusayo, yize liyindawo yemvelo yobuhle obukhulu. Itholakala e-Extremadura, ikakhulukazi kufayela le- IJerte Valley. Lesi yisiqiwi semvelo esivikelekile, lapho singathola khona izimpophoma eziningi namatshe akhethekile. Kunemifudlana eminingi egcina ngokunika umfula iJerte, nokuthi lapho isendleleni yakha izimpophoma nezimpophoma ezincane, ezakha indawo enhle. Kunemizila eminingi yokuhamba izintaba kodwa okwaziwa kakhulu yiLos Pilones, amachibi emvelo adalwe ukuguguleka kwamanzi edwaleni. Lezi zindawo zibizwa ngokuthi amaketela amakhulu, futhi ziyizindawo ezilungele ukugeza ngokunakekela ukungasheleli noma ukuwa.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Izindawo ezingama-8 zemilingo eSpain (II)